Friday .3July . 2020
ကားစငှားတုန်းက ၃၅၀၀တဲ့ လမ်းတစ်ဝက်ရောက်မှ ၄၀၀၀တောင်းတာမပေးလို့ ခရီးသည်ကိုဆဲဆိုသွားတဲ့ကားသမား
သင်္ဃန်းကျွန်းဘုရားလမ်းမှတ်တိုင်အကျော်က နေ မြေနီကုန်းစမ်းချောင်းတရားရုံးကို ၃၅၀၀နဲ့လိုက်လာပါတယ်။Coffee circle နားရောက်တော့ ၄၀၀၀တောင်းပါတယ်။ညီမက ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အကို၃၅၀၀နဲ့လိုက်လာတာလေ လို့ပဲ ပြောပါတယ်။နေမကောင်းလို့ လေသံတောင်မမာပါဘူး တကယိကိုတိုးတိုးပဲပြောတာပါ။အဲ့ဒါကို ငါးရာတိုးမပေးလို့ဆိုပီးတော်ပီ တော်ပီ ၅ရာလေးနဲ့မပြောချင်ဘူး ဆိုပီးပြောပါတယ်။ညီမလည်းနားကြပ်တပ်ပီးဘာမှဆကိမပြောပါဘူး။
ရှမ်းလမ်းမီးပွိုင့်နားရောက်တော့ အကိုရေကွေ့လိုက်ရုံပဲရတယ်လို့ပြောတာကိုသိတယ် နားလည်တယ်ဆိုပီးထပ်ပြောပါတယ်။ကားခထုတ်ရှင်းတော့လည်း ပိုက်ဆံပေးတာကိုမယူဘဲ သူ့ပိုက်ဆံအိတ်ကိုအရင်ဖွင့်ပီး ဟိုရှာဒီရှာလုပိပါတယ်။၁သောင်းတန်ပေးတာကို အကြွေမပါဘူး ဆိုပီး ဆင်းလဲခိုင်းပါတယ်။ညီမက အကိုရယ်ဒီနားမှာဆိုင်မရှိဘူး ဘယိမှာလဲရမလဲကောင်းကောင်းပြောတာပါ မရှိ ရှိတဲ့နေရာဆင်းလဲလို့ပြောပါတယ်။
ပီးတော့ နင်ကlaw နဲ့ပီးတာလားအေး ရှေ့နေဖစ်ဖစ်ဘာကောင်မဖစ်ဖစ် စောက်ထင်မကြီးဘူး ဆိုပီး ပလိန်းကြီးအော်ဟစ်ပါတယ် ကားကိုလည်း ရပ်ရမဲ့နေရာရောက်တာတောင် အရှိန်မလျော့ပဲမောငိးပါတယ် ညီမကလဲ အကို့ကိုလည်း ဘယ်သူကမှအထငိမကြီးခိုင်းဘူး လို့ပြနိပြောတာကို စောက်လျှာမရှည်နဲ့ အကြွေဆင်းလဲဆို လဲဆိုပီးပြောပါတယ်။
ညီမဓာတ်ပုံရိုက်တော့လည်း နင်တို့လိုဟာဒေစောက်ထင်မကြီးဘူး…ာသယ်မ ဘာညာဆိုပီး အော်ဟစ်ဆဲဆိုသွားပါတယ် စမ်းချောင်းတရားရုံးရှေ့မှာပါ ရုံးထဲလူတွေသက်သေရှိပါတယ်။အဲ့အကောင်နာမည်က အေးချမ်းအောင်ပါ။ဒီလိုကောင်မျိုးဒေနဲ့မကြုံရအောင်ပါ share လို့ရပါတယ်။ပိုက်ဆံ ၅ရာအတွက် ရေးကြီးခွင်ကျယ်တင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးနော် ၅ရာလောက်နဲ့ အဲ့လောက်မိုက်ရိုင်းစရာ ဒေါသထွက်စရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ် သူလွန် ကိုယ်လွန်ဆို ကျမလည်း အောက်တန်းစားဒေအဆဲခံပီး ဒီပို့စ်ကိုမတင်ပါဘူးနော် ဥပဒေသမား ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်ထိမဲ့အလုပ်မျိုးမလုပ်ပါဘူး။
ဒီပို့စ်ကို ကိုယ်မှန်တယ်လို့ အလုံးစုံတာဝန်ယူရဲလို့တင်တာပါ။P.s ကျွန်မ ရှေ့နေတယောက်ပါနော် ။unifrom နဲ့စီးလာတာပါ တမင် ရှေ့နေမို့လို့ စော်ကားတယ်ပဲထင်ပါတယ်။ဒီလူနဲ့သိတဲ့ taxi ဆရာများရှိရင် မေးကြည့်ပါ။သူယောကျ်ား သူလိပ်ပြာသူလုံတယ်ဆိုရင် အမှန်တိူင်းဖြေပါလိမ့်မယ် လိမ်ညာပြောဆု်ခဲ့ရင်တော့သူ့ထိုက်နဲ့သူကံပါပဲ ငါတို့ကတော့နင်တင်တာမကျေနပ်ဘူးဟေ့ မျက်နာချင်းဆိုင်ရှင်းမယ်ဆိုလည်း အကိုတို့လူကို စမ်းချောင်းမြို့မရဲစခန်းကို ခေါ်လာခဲ့ပါ ရှင်းရဲပါတယ်။ကိုယ်မှန်နေလို့ ကိုယ်တင်ထားတဲ့ပို့စ်ပါ။ Crd#original post
“ကလေးမလေး ကို ဘာတစ်ခုမှ မလုပ်ထားပါဘူး။ စွပ်စွဲ ခံထားရတာပါ။ ကာယကံရှင် ကောင်မလေးကို သွားမေးကြည့် ကြပါ” လို့ အမှုအပေါ် လုံးဝ ငြင်းဆန်လိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းရာဇာ ၏ ဇနီး
အန်အယ်လ်ဒီ မဲဆွယ်စည်းရုံးရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ပုံ ဆက်လက်အသုံးပြုသွားမည်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးဝင်းမြင့် ရွေးကောက်ပွဲစည်းရုံးရေး စပြီ
ဖားကန့် ကျောက်စိမ်းတွင်းမြေပြိုမှု လူ ၁၆၀ ကျော် သေဆုံး